Samsung Galaxy S မှာ modem ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ Androidsis
Samsung Galaxy S, ICS အခြေပြု roms တွင် modem ကိုဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ
Francisco Ruiz | | Samsung, လဲ tutorial
၏အချို့အသုံးပြုသူများ၏တောင်းဆိုမှုကိုမှာ Androidsis ပါငါရှင်းပြမယ် android အခြေပြု roms Ice Creram Sandwich တွင် modem ကိုမည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း.
modem ပြောင်းခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ Samsung Galaxy S ၏မကောင်းသောဆက်သွယ်မှုကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာ၏ modem သည်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည် ဒေတာကွန်ယက်အဆိုပါ ဝိုင်ဖိုင်, အ ဘလူးတုသ်။
တခါတရံငါတို့တွေ့ဆုံကြသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal ကိုများအတွက်ပြုပြင်မွမ်းမံ roms, အရာတကယ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပေမယ့်ကံမကောင်း, ထို option သော ချက်ပြုတ် အဖြစ် installed ပါပြီ modem ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လုံးဝအလုပ်မလုပ်ပါ။
ထို့နောက်သင်ကြားခြင်းအပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Samsung Galaxy S ၏ modem ကိုမည်သို့မှန်ကန်စွာပြောင်းလဲရမည်နည်းငါပြန်လည်ထူထောင်ရေးကနေ flashed ခံရဖို့ပြင်ဆင်ထား modem သုံးခုအားဖြင့်သင်တို့ကိုငါသွား၏, သူတို့ထဲကနှစ်ခုကနေတိုက်ရိုက်ယူ Samsung က Galaxy Nexusနှင့်သူတို့ထဲကနောက်ဆုံး, modem မူရင်း JVU ၏ roms စတော့ရှယ်ယာ၏ Samsungအသုံးပြုသူများကိုအကောင်းဆုံးရလဒ်များပေးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမယ် အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောရေဒီယိုသုံးခုပါရှိသော zip ကို download လုပ်ပါဖိုင်ကို download လုပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကို zip လုပ်ပါလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့၏ PC ၏ desktop ဖြစ်သည် ငါတို့သည်ကူးယူပါလိမ့်မယ် SD Card အမြစ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Galaxy ၏ အတွင်းပိုင်းသုံးဇစ်ဖိုင်များဒီအမှုကိုပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ကပိတ်ထားနိုင်ပါတယ် Samsung Galaxy S ပြန်ဖွင့်ပါ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး mode ကို, ငါတို့ modem ကိုပြောင်းလဲသွားကြသည်ဘယ်မှာကနေဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့်မြင့် / Dalvik cache ကိုရှင်းလင်းပါ
ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်ရန်စိတ် ၀ င်စားသောရေဒီယိုဇစ်ကိုသွားပြီး၎င်းကိုတပ်ဆင်ရန်အတည်ပြုသည်။
ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ modem အသစ်ကို install လုပ်မည် KF1 modemကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံတွင်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုတို့ပါဝင်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Samsung Galaxy S, Rom Dark Knight ၅.၅
ဒေါင်းလုပ် - Samsung ICS ရေဒီယိုများ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung Galaxy S, ICS အခြေပြု roms တွင် modem ကိုဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ
ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် 850MHZ band မရှိတဲ့ modem တွေရှိပြီးအချို့အော်ပရေတာတွေနဲ့နိုင်ငံတွေမှာသုံးတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားသင့်ပါတယ်။
ထောက်ပံ့ပေးထားသော modem များအားလုံးသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအော်ပရေတာအားလုံးအတွက်တရားဝင်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ရဲ့မိုဘိုင်းဟာ UMi သံတူတစ်ခုရဲ့ခြားနားချက်နဲ့ Kit.Kat 4.4.4 ကိုကြည့်ပြီးပြ.Kနာတစ်ခုရှိတယ်။ ကျွန်တော်မတော်တဆဖြစ်မှုကြောင့်သေသွားခဲ့တယ်။ ၎င်းကိုမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်လုပ်လိုက်သောအခါပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ယခုတွင် Ime ကိုကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်။ ၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ မူရင်း ime ကိုသွင်းထားသည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အချက်ပြမှုကိုအကြိမ်များစွာဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရေဒီယိုများသို့မဟုတ် modem များဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိူင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ရာအူးလ် Alfredo Neira Novoa ဟုသူကပြောသည်
850Mhz band တွင်ပြီးပြည့်စုံသော JVU ကိုသုံးပါ။ Digitel Venezuela တွင်စမ်းသပ်ပြီးသည်နှင့် H သည်စုံလင်သည်။
Raul Alfredo Neira Novoa အားစာပြန်ပါ
မေးခွန်းတစ်ခု - ပထမအဆင့်နှစ်ဆင့်မပြီးဆုံးရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။
အကယ်၍ သူတို့လုပ်ရမယ်ဆိုရင်၊ တစ်ခုချင်းစီဘာလုပ်တယ်ဆိုတာသိသလား (cache အခန်းကန့်ကိုရှင်းလင်းပြီး Advance / Wipe dalvik cache)
ယခင်စနစ်များ (သို့) roms အကြွင်းအကျန်များ၊ သုံးစွဲသူအချက်အလက်များကိုဖယ်ရှားရန်အတွက်ရှင်းလင်းသည်။ ထို့ကြောင့်ဤနည်းအားဖြင့်ပconflictsိပက္ခများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အပြင်အခြားပashesိပက္ခများနှင့်အသုံးချခြင်းကိုပိတ်ပစ်နိုင်သည့်အခြားတောက်ပသည့်အကြွင်းအကျန်များမပါ ၀ င်ပါ။
ပြီးရင် system ကို reboot လုပ်ပါ
sdcard ထံမှ update ကိုသက်ဆိုင်ပါသည်
cache ကို partition ကိုသုတ်
ငါတစ်ခုတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားတိုင်း“ Instalation aborted” နှင့် zip address တွင်အမှားတစ်ခု (status 7) ကဖော်ပြသည်။ ထိုအရာကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ?
Migueloliveros ၈ ဟုသူကပြောသည်
JVU ဗားရှင်းသည် Digitel Venezuela တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ Kf1 သည် Digitel တွင် H ကိုမြှင့်တင်ခြင်းမပြုပါ။ ကျွန်ုပ်မကြိုးစားရသေးသောအခြားအချက်အလက်များမှာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
Ilcapo Co. ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်ဤပြissueနာနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာအနည်းငယ်ရှိသည်။ ပုံမှ rom မှနောက်ဆုံး remics သို့ပြောင်းလဲခြင်းသည် imei သို့မဟုတ် sim ကိုအသိအမှတ်မပြုသကဲ့သို့၎င်းသည်လွှမ်းခြုံမှုကိုလည်းပေးသောကြောင့် modem ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။ 4shared ရှိ samsung ics ရေဒီယိုများ၏ link ကို download လုပ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောဖိုင်မရှိပါ။ တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်ုပ်အား cable တစ်ခုပေးနိုင်ပါသလား ???
Ilcapo Co သို့ပြန်ကြားပါ
ဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်မရှိပါ ...... တောင်းပန်ပါတယ် !!!
ငါဘယ်လိုသို့မဟုတ်ဘာကြောင့်ပေမယ့်စာမျက်နှာကိုစနစ်တကျဖွင့်လှစ်မပြခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ငါ ... ယခုငါဒီကိစ္စကိုတွေ့ရှိခဲ့ ... ... ... ... downloaded ဖိုင်ကိုယခုငါတတ်နိုင်လျှင်ကြည့်ရှုကြကုန်အံ့နိုင်အောင်မဖွင့်ကြဘူး။ Rom ကိုပြောင်းလဲပြီးအရာအားလုံးဟာပုံမှန်ဖြစ်ပြီးတည်ငြိမ်နေတယ်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ galaxy s I9000T panama country အတွက်မည်သည့် modem ကိုသင်အကြံပြုသနည်း ????
ဤ modem များသည် cyanogenmod rom နှင့်အတူ i9001 (S Plus) အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။
ကောင်းပြီ၊ မသိဘူး၊ ကြိုးစားပြီးပြောပြပါ
ဤ modem များကို android4.1.2 တွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
05/11/2012 00:48 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
ငါမှာဖြန့်ချိထားသော galaxy s ရှိပေမယ့် 3g or H ကို EDGED မှာမတွေ့ရပါ။ အခြားဖိုရမ်များတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်ဥရောပ modem တစ်ခုတင်ထားသည်ဟုပြောခဲ့ပြီးပါပြီလား။
05/11/2012 00:56 pm တွင်, "Disqus" ရေးသားခဲ့သည်
Alberto ဂျေဖာနန်ဒက်ဇ Fuentes ဟုသူကပြောသည်
အဲလ်ဘတ်တိုဂျေဖာနန်ဒက်ဇ Fuentes အားစာပြန်ပါ
ဒီ modem တွေဟာ Gingerbread နဲ့ထိုက်တန်ရဲ့လား။
မဟုတ်ပါ၊ Cyanogenmod9နှင့် 10 အတွက်သာ
အိုကေ၊ အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Gingerbread အတွက် modem တွေဘယ်မှာရနိုင်မလဲသိလား။
Odin မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းမှ kernel နှင့် modem downloads များကိုရယူနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုဂရုမစိုက်ပါ။
Alberto ဖာနန်ဒက်ဇ Fuentes ဟုသူကပြောသည်
တကယ်ပြည့်စုံတယ်။ အများကြီးရှိတယ်၊ ငါတို့ကြိုးစားစမ်းကြည့်ရ ဦး မယ်၊ ကျေးဇူးပါလူသား၊ မင်းကအက်ကွဲတယ်
အဲလ်ဘတ်တိုဖာနန်ဒက်ဇ Fuentes အားစာပြန်ပါ
Alfonso Olivares ဟုသူကပြောသည်
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ g movbnet venezuela တွင် gingerbread ဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ 2.3.5
Alfonso Olivares အားပြန်ပြောပါ
ဖရန်စစ္စကိုကော။ သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မေးခွန်းအနည်းငယ်၊ ဖြေပြီးသွားရင်ဝမ်းနည်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ရှာမတွေ့ပါဘူး၊ CF-Root-XX_OXA_JVU_1-v2.3.6 အတွက် KF4.3 ဒါမှမဟုတ်တခြား modem ကိုသုံးလို့ရလား။ .3-CWMXNUMXRFS?
Edit: R ကိုမြှင့်တင်ဖို့သာဖြစ်တယ်၊ မဟုတ်ရင်ပြီးပြည့်စုံတယ်
ကြိုးစားကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ယင်ကောင်အတွက်အရန်သင့်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှ nandroid အရန်သင့်သိမ်းဆည်းထားပါက၎င်းသည်သင့်အတွက်ကောင်းလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။